Kenya oo ciidamo ku daabulaysa Koonfurta Somalia, si ay u ugaarsato kooxihii afduubashada ka geaystay dalkeeda. – Radio Daljir
Kenya oo ciidamo ku daabulaysa Koonfurta Somalia, si ay u ugaarsato kooxihii afduubashada ka geaystay dalkeeda.
Kenya, Oct 18 – Dawladda dalka Kenya ayaa ciidamo u dirtay dalka ay jaarka yihiin ee Somalia, waxaana qorshahani uu qayb ka yahay iskuday lagu doonayo in lagu baacsado kooxo mintidiin ah oo dalkaasi Kenya ka fuliyey hawlo afduubasho ah oo isku xig-xigay.
Afhayeenka dawlada Kenya Alfred Mutua, ayaa sheegya in ay Somalia u galeen si ay u baacsadaan maleeshiyadka al-shabaab ee falalka Afduubashada ah ka geystay dalkooda Kenya, waxaana uu xaqiiijiyey in ciidamadoodu ay xadka ka gudbeen, laakiin diblamaasi Somaliyeed oo ka tirsan ergada diblamaasiyadeed ee Somalia ka joogta Qaramada Midoobey oo u waramay hay?adda Warbaahinta ee Britain ee BBC-da ayaa sheegay in haddii wararkaasi ay sax yihiin ay talaabadaasi xad-gudub qaawan ku tahay qaranimada iyo madaxbanaanida dalka Somalia.
Muwaadiniin dhawr ah oo reer galbeed ah ayaa dhawaanahay lagu afduubay dalka Kenya, waxaana la rumaysanyahay in qafaalkaasi ay ka dameeyeen kooxaha mintidiinta ah ee ka dagaallama gudaha Somalia, oo dadkaasi u kaxaystay gudaha Somalia.
Laba shaqaaalaha gargaarka ah oo u dhashay dalka Spain ayaa salaasadii asbuucii hore laga afduubta xerada Dhadhaab ee gudaha dalkaasi Kenya, halkaasi oo ay ku noolyihiin ku dhawaad nus malyuun qaxooti Somali ah, waxaana afduubkaasi keenay in hay?adaha gargaarku dhimaan joogitaankooda halkaasi iyo weliba adeegyada kale ee aan daruuriga ahayn ee ay halkaasi ka bixin-jireen.
Laba haween ah oo u kala dhashay Britain iyo Fraansiiska ayaa bishii hore laga afduubtay xeebaha lagu raaxaysto ee Kenya ee u dhaw dalka Somalia, waxaana falalkaasi ay dharbaaxo adag ku noqdeen dalxiiskii dalka Kenya oo looga cararay amni-darro darteed.
Xoghayaha koowaad ee Ergada Somaliyeed ee Qaramada Midoobey Cumar Jamaal, ayaa sheegaya in warbixinada ku saabsan askar keenyaati ahi in ay ka gudbeen xadka dalkiisa ay yihiin kuwo aan si rasmi ah loo xaqiijin, laakiin waxaa uu sheegay in uu cabsi ka qabo in ku luglahaanshaha Kenya ee Somalia ay xaaladda uga sii dari karto ama xumayn karto.
?Waxaan si wanaagsan u fahmeynaa walaaca dalka Kenya, markaa haddii la qaadayo tallaabo kasta markaa dawladda Somaliyeed waa in ay arrintaasi la socotaa, dawladda Somaliyeed waa in la waregliyaa, dawladda Somaliyeed, waa in ay ogtahay faahfaahinta waxaa dhabta ah ee socda, haddii kale waxaa ay noqoneysaa sheeka kale oo ka duwan? ayuu yiri Cumar Jamaal.
Dad goob-joogayaal ah ayaa soo sheegay in ay arkayeen illaa 25 gaari oo ah nooca qafilan oo ay saaranyihiin ciidamo keenyaati ah oo ka gudbaya magaalada Dhoobleey oo u dhaw xadka labada dal ee Somalia iyo Kenya, wararka deegaankaasi laga helayo ayaa sidoo kale sheegaya in la arkayey dabaabadaha iyo hubka kale ee culus oo ay wataan ciidamada Kenya.
Dadka deegaanka iyo goob-googayaasha ayaa sidoo kale xaqiijiyey in ay arkayeen diyaaradaha qumaatiga ee kuca ee loo yaqaan helicopter-yada ee ay leeyihiin Militeriga Kenya oo kaabaya ciidamada dhulka ee Kenya.
Taliye sare oo Militeri oo ka tirsan ciidamada Somalia Cabdi Yuusuf, ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Routers in diyaaradaha dagaalku ay weerareen laba fariisin ama saldhig oo ay lahaayeen Al-shabaab oo ku yaalla Koonfurta Somalia, laakiin ma xaqiijin in diyaaradahaasi dagaal laga leeyahay dalkaasi Kenya.
?Waxaan garan karaa diyaaradaha Militerige ee halkaan hawsha ka wada, laakiin jaarkayagaa Kenya si buuxda ayey noo taageerayaan Militeri ahaan, hawlgalkayaguna waa in Al-shabaab laga saaro gobolka? ayuu yiri Taliye sare Cabdi Yuusuf.
Wakaaladda wararka ee AFP ayaa iyaduna dhinaceeda soo werisay in Kooxda xagjirka ah ee Al-shabaab ay isku dayayaan in arrintan ay ka faa?iideystaan oo meelaha ay maamulaan qaylo-dhaan ka soo saaraan, si ay dadka ugu dhiirigeliyaan in dalkoodii lagusoo duulay ayna la gudboon tahay in ay qaadaan dagaal ay isku difaacayaan oo ay ku tilmaameen Jihaad.
Dadka ku dhaw deegaanka Qooqaani iyo magaalooyin kale oo Koonfurta Somalia ah ayaa laga soo weriyey in kooxaha Mintidiinta ah ay galayaan dadka guryhaooda, waxaana ay si qasab ah u askaraynayaan dagaalyahamiin cusub, iyadoo ay dadka u sheegaya in ay waajib ku tahay in ay ka qaybqaataan dagaalka Jihaadka.
Sarkaal sare oo ka tirsan Al-shababa Xasan Turki ayaa wacad ku maray in ciidamada Kenya la jebin doono oo dib loo celindoono.
?Kenya waxay ku xad-gudubtay xuquuqdii dhulka Somalia, markii ay soo gashay dhulkan, laakiin waxaan kuu xaqiijinayaa in ay noqon doonaan oo dhabarka jeedindoonaan, iyaga oo dulaysan oo niyadjabsan bi?idni laah, markaasi dagaalyahamiinta mujaahidiintu waxa ay dhadhanasiindoonan Kenya xanuunka xabada? ayuu yiri Xasan Turki.
C/raxmaan Cumar Cismaan oo ah afhayeenka xukuumadda federaalka Somalia ee ay taageerto qaramada midoobey ayaa sheegay in Kenya ay gacansiineyso ciidamada Somalida, waxaana uu yiri ? Kenya waxaa ay taageero loojistiko iyo mid niyadeed siineysaa ciidamadayada, markaa ciidamada la dagaalamayaa Al-shababa ee dhulka jooga waa ciidamadii Somalia oo baacsanaya Al-shababa?.
Wasiirka difaaca ee Kenya Yuusuf Maxamed xaaji ayaa laftigiisu yiri ? waxaa kusoo weeraray cadaw, waxaa laguu ogolyahay in aad ka daba-tagtid oo baacsatid cadawgaasi illaa meesha aad ka heleyso, waxana markaa cadawgaasi ku qasbidoonaa meel xadkayaga ka fog?.
Wariyayaasha ayaa sheegaya in dad ka reer Kenya qaarkood ka baqanayaan in dalkooda ay bartilmaameedsadaan Al-shabaab haddii uu ku lugyeesho khilaafka Somalia.
Wasiirka amniga gudaha ee Kenya George Saitoti, ayaa Sabtidii ku dhawaaqay in ciidamo la dirayo si ay ula dagaalamaan Al-qaacidada ku sugan Somalia, waxana talaabadaasi timi maalmo uun kadib markii la afduubay laba haween ah oo ka shaqaynayey hawlaha gargaarka ee hay?adda Medecins Sans Frontieres (MSF), oo lagu kala magcaabo Blanca Thiebaut iyo Montserrat Serra, waxaana hablahaasi laga afduubay xerada Dhadhaab oo ah xerada qoxootiga ee adduunka ugu weyn.
Xerada Dhadhaab oo 80 km ku jirta gudaha Kenya ee xadka labada ee Somalia iyo Kenya ayaa hoy u ah ku dhowaad nus malyuun qaxooti ah oo inta badan dadkaasi ay yihiin Somali, waxana dadkaasi kaso carareen macaluusha iyo khilaafka Somalia.
21kii September qof Kenyan ah oo u shaqaynayey hay?ad samafal ah ayaa laga afduubtay xadka Somalia iyo Kenya.
Bishii hore haweeney 56 jir oo British ah oo lagu magcaabo Judith Tebbutt ayaa la afduubay kaddib markii ninkeedii david la dilay, waxaana lamaanahaasi ku sugnaayene meel dururgsan oo loo dalxiis tago oo u dhaw dalka Somalia oo lagu magcaabo Kiwayu.
1-dii October, haweeney curyaan ahayd oo 66 jir, islamarkana u dhalatay dalka faransiiska ayaa waxaa afduubtay rag hubaysan, iyadoo ku sugnayd deegaanka lagu tamashleeyo ee Manda, waxaana loo kaxaystay dalka Somalia.
Xafiiska arrimaha dibadda ee boqortoooyada Ingiriiska ayaa kula taliyey muwaadiniinta British-ku in haddii aanay lagama maarmaan ahayn aanay u safrin dhulka u dhow xadka Somalia.